ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့် Rotary tools တွေကိုလိုအပ်သလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့် Rotary tools တွေကိုလိုအပ်သလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့် Rotary tools တွေကိုလိုအပ်သလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-03-20 မူလ:ဆိုက်ကို
rotaမှီခိုကိရိယာသည်သေးငယ်သောလက်ကိုင်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာရဲ့ထိပ်မှာ detach လုပ်လို့ရတယ်။ ၎င်းကိုသယ်ဆောင်နိုင်သောလျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်သင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ဤcarbide rotary tool ကိုဖြတ်ရန်, ပိုလန်, ထွင်းထုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤကိရိယာသည်များသောအားဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်လှည့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ rota ၏မြန်နှုန်းနှင့်ပွတ်တိုက်မှီခိုtool ကိုခွင့်ပြုပါထိုအရာသတ္တု, ပလပ်စတစ်နှင့်အခြားတ္ထုများဖြတ်ရန်။ သင်လုပ်ဆောင်လိုသောအလုပ်ကိုအရအသုံးပြုရန်အတွက်ကိရိယာ၏လည်ပတ်မြန်နှုန်းကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်:
အနိမ့်မြန်နှုန်း - တူးဖော်တွင်း
အလတ်စားမြန်နှုန်း - သဲ, ကြိတ်, ဖြတ်တောက်ခြင်း
မြန်နှုန်းမြင့် - သစ်သား / ဖန်ခွက်ထွင်းထု
rotary tool ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်ရွေးချယ်ထားသည့်ကိုချိတ်ဆက်ရမည်Rotary Tool ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံအဆိုပါ rotary tool ၏ထိပ်ရန်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်လိုအပ်ချက်များအရကွဲပြားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုအစားထိုးနိုင်သည်.ဖြတ်တောက်ခြင်း, စိန်များနှင့်လှိမ့်သောဗုံများအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်လှည့်ဖြားသောဗုံများအတွက် discs များရှိသည်။ သင်တစ် ဦး ဝယ်သည့်အခါCNC ကြိတ်စက် rotary tool ကိုပါ0င်သော bits ကိုကြည့်ပါ, ပြီးနောက်သင်0ယ်လိုသည့်အပိုများကိုကြည့်ပါ။
အပေြာင်းRotary tool ၏အစိတ်အပိုင်းများ
ARotary Tool တွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းသုံးခုရှိသည်။ ဤအရာများသည်:
Collet: ဒီအပိုင်းဟာရှေ့ဘက်မှာရှိတယ်အကောင်းဆုံးပါဝါကိရိယာများထို့အပြင်၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းဝင်လာသည့်နေရာလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသင့်လျော်သောအနေအထားတွင်ပြုပြင်နိုင်သည်, ထို့ကြောင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်အလုပ်ချိန်တွင်မလွှဲမလွှဲနိုင်အောင်သို့မဟုတ်ပျံသန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
သော့ခတ် PIN: ကမုချသင့်ရဲ့ rotary tool ၏ဘေးထွက်အပေါ်တစ် ဦး ခလုတ်။ သင်ကနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းသို့မဟုတ်သီးခြားဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်ဤကြယ်သီး.
မြန်နှုန်းခေါ်ဆိုမှု - ဘယ်လောက်မြန်မြန် (သို့မဟုတ်နှေးကွေးခြင်း) ကိုချိန်ညှိသည်။ အချို့သောလက်သမားပါဝါကိရိယာများအမြင့်နှင့်အနိမ့် settings ကိုသာရှိသည်ဒါပေမယ့် oသူသည် 1 မှ6အထိအရေအတွက်အခြေပြု settings များရှိသည်။
လှျင်ခင်ဗျားတို့ချင်တယ်Rotary ကိုဝယ်ပါကိရိယာများကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်စဉ်းစားသင့်သည်။ ၎င်းကိုထွင်းထုရန်အတွက်သာအသုံးပြုပါကမြန်နှုန်းနှစ်ခုကိုသာ0ယ်ရန်သာလိုအပ်သည်ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများသို့သော်သင်သတ္တုပြားများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကိရိယာများပိုမိုများပြားသောကိရိယာများကိုအသုံးပြုလိုပါကမြန်နှုန်းချိန်ညှိချက်များပိုမိုများပြားသောကိရိယာများကိုရွေးချယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Rotary ကိရိယာများ?
လက်စွဲစာအုပ်သို့မဟုတ် non- လှည့်ကိရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက rotaမှီခိုကိရိယာများတွင်အားသာချက်နှစ်ခုရှိသည်, တစ်ခုမှာမြန်နှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ခုမှာတိကျမှန်ကန်မှုရှိသည်။ သငျသညျသတ္တုအရက်ဆိုင်ကိုလက်ဖြင့်ဖြတ်တောက်ပါကအချိန်နှင့်လုပ်အားများစွာယူလိမ့်မည်စံပြပါဝါ tools များအချိန်တိုအတွင်းအလွယ်တကူအတူတူလုပ်နိုင်တယ်,Rotaryကိရိယာများသည်သင့်အားကျဉ်းမြောင်းသောနေရာ၌အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများကိုဖန်တီးခွင့်ပြုသည်။wကြွေထည်များပေါ်တွင် Hethry နှင့် Groove ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ် groove groove များကိုဖြတ်တောက်ခြင်း, Rotary Tools များကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Rotary Tools များကို0ယ်ရန်စျေးကွက်သို့မသွားမီသင်အသုံးပြုမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုစဉ်းစားသင့်သည်ပါဝါ Tool ပစ္စည်းများ:
·သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေသောပစ္စည်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက် (ဥပမာပလပ်စတစ်, ဖန်, ဖန်, သံမဏိစသည်တို့)
·သင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်နှုန်းများပိုမိုများလေ, သင်နှင့်သင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်လေဖြစ်သည်ပါဝါ Tool ကို combo ပစ္စည်းများ.
·ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်စကားပြောပါ။ သင်လျှော့စျေးဖြင့်အပို -bits များကိုသင်ရနိုင်မလားကြည့်ပါ။
Rotary Tools များသည်အလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည် Rootary Tools များကိုမှားယွင်းစွာအသုံးပြုပါက၎င်းသည်ကြီးမားသောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတော့,Rotary File Set Rotary Toolsဟက်တာအမြှအလွန်မြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်သောအမြန်နှုန်းနှင့် Sharpinant မြန်နှုန်းနှင့်ချွန်ထက်သောလေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း, အချိန်တိုအတွင်းသွေဖည်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်တစ် ဦး ဝယ်ချင်လျှင်မစ်ကြီးtool, သင်ကမသုံးမီ၎င်း၏လုံခြုံမှုကိုဂရုတစိုက်နားလည်သင့်ပါတယ်.
carbide rotary tool ကို Rotary Tool ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံ CNC ကြိတ်စက် rotary tool ကို အကောင်းဆုံးပါဝါကိရိယာများ လက်သမားပါဝါကိရိယာများ ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများ စံပြပါဝါ tools များ ပါဝါ Tool ပစ္စည်းများ ပါဝါ Tool ကို combo ပစ္စည်းများ Rotary File Set Rotary Tools